The Ab Presents Nepal » १५ सय वर्ष पुरानो भीरमा टाँसेर बनाइएको यो मन्दिरको दर्शन गर्दै यसको महिमा थाहा पाई राखौ !
१५ सय वर्ष पुरानो भीरमा टाँसेर बनाइएको यो मन्दिरको दर्शन गर्दै यसको महिमा थाहा पाई राखौ !
१.भनेगर : भेनेगरमा केही मात्रामा एसिड प्रयोग गरिएको हुनाले प्रत्यक्ष अनुहारमा भेनेगरको प्रयोग गर्नु हुँदैन् । जसले अनुहारको छालामा असर पार्ने भएकाले भेनेगरमा अन्य चिज मिसाएर मात्र प्रयोग गर्नु पर्ने छ । सकेसम्म यसको प्रयोग नगर्दा नै उचित हुनेछ २.बियर : बियर पनि अनुहारमा लगाउनको लागि उचित छैन् । एसिड मिसेर निर्माण गरिने भएको कारण दैनिक रुपमा अनुहारमा बियर प्रयोग गर्दा डन्डिफोर आउने र अनहार भारी हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।